သံယောဇဉ် အမျှင်တန်း မိရင်ဖြင့် | သူတို့ ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်းရသော
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တပ်ရင်းရုံးကိုသွားပြီ တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးနဲ့ လစာကြပ်အဖွဲ့၊ ကျန် ရုံးအဖွဲ့တွေကို နှုတ်ဆက် လိုက်တယ်။ တပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် ဒုတပ်ရင်းမှူး နဲ့ တပ်တစ်တပ်လုံးက မန္တလေးမြို့တွင်း လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြရတာကိုး။ ဒီလိုပါပဲ တပ်တွေက ရှေ့တန်းကပြန်လာလို့ နောက်တန်းမြေမှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားတယ်ဆိုတာ မြို့နေလူထုအကြားမှာ လုံခြုံရေးတစ်ရပ်လုပ်ပေးရင်း အနားယူတယ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့။ ကားသမားနဲ့အတူ လိုက်ပို့မယ့် အကူ ရဲဘော်လေးက ကားနားမှာအသင့်စောင့်လို့ ။ မိမိစာရွက် စာတမ်း ထည့် ထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ပိုက်လို့ ဗိုလ်နန္ဒအောင် တစ်ယောက် ၄ နှစ်ခွဲတာ နေထိုင်သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ အရာရှိ ရိပ်သာကြီးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ ရင်ထဲမှာတော့ ဆို့နင့်နေသလိုလိုကြီးပါ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကျောင်း ဆင်းစ ဒုဗိုလ်ဘဝ အရာရှိပေါက်စ အတွေ့အကြုံတွေကို မိခင်တပ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့အညီ ဒီတပ်ကြီးနဲ့အတူ အရာရှိ စစ်သည်အားလုံးက နေသား တစ်ကျ ဖြစ်အောင် သိအောင်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တာလေ။ အခုဒီမြေဒီတပ် ဒီဒေသကနေ အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့အမိန့် ဆိုတာ ကြီးကျလာပြီး ခွာရဦးတော့မှာပေါ့။ စစ်သားဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါ ပဲကွာဆိုတဲ့ စီနီယာကြီးတွေ ပြောဆိုဆုံးမ ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပစ္စည်းတွေစုံပြီးလား တပည့်ကျော်လို့ တစ်ချက် လှမ်း မေးအပြီးမှာပဲ ဦးဗိုလ်ကြီး ဦးဗိုလ်ကြီး ဆိုပြီး ဂါဝန်နီနီလေးနဲ့ ၆နှစ်အရွယ် ကလေးလေး သက်သာဆိုင်ဘေးလမ်းကနေ ပြေးတက်လာနေပါတယ်။ ဟာဟိုမှာပြေးလာနေတဲ့သူ အဲဒါ(မိမိပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ရေရွတ်မိတုန်းရှိသေး)။ဟုတ်တယ် ဗိုလ်ကြီး အဘငြိမ်းအောင်နဲ့ အန်တီမြ တို့က ကလေးအဖေနဲ့အမေအတွက် ကုသိုလ်ပြန်လာလုပ်ပေးလို့ ကလေး ကလည်း ဒီတပ်ကို ခဏပြန်ချင်တယ် ဆိုလို့ ပိုးပိုးလေး မနေ့ကတည်းက ပြန်ရောက်နေတာ.....တဲ့။
ပြေးပြီးမိမိဆီဝင်လာတဲ့ ကလေးကို ပွေ့အချီလိုက်မှာ ပါးပြင်ကို အတင်းနမ်းလာပါတယ်။ မျက်ရည်တွေက စီးလို့ ဦးဗိုလ်ကြီးလည်း ဟိုးအဝေးကြီးကိုပြောင်းရတော့မှာဆို ဟုတ်လား။ ဦးဗိုလ်ကြီးလည်း ပိုးပိုးကို ထားခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ အဟီးဟီး ဆိုပြီး တရစပ်ပြောလည်းပြော ငိုလည်းငိုပါတော့တယ်။ စိတ်တွေတင်းထား တဲ့အကြားက ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်တွေဝေ့လာပါတယ်။ မေကြီးထားခဲ့ပြီးမကြာဘူး ဖေကြီးက ထားသွားခဲ့တယ် အခုလည်း ပိုးပိုး ချစ်တဲ့ ဦးဗိုလ်ကြီးကလည်း အဝေးကြီးကိုပြောင်းသွားတော့မှာ ဟီးဟီး ဦးဗိုလ်ကြီးနဲ့အတူ ပိုးပိုးလည်း လိုက်မယ်….တဲ့။ မဟုတ်ဘူးလေ သမီး ပိုးပိုး ဦးဗိုလ်ကြီးတို့က တာဝန်အရသွားရမှာလေ။ သမီးက ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်ရဦးမှာလေ။ အခုတောင် သမီးအတန်း စာတွေ ပျက်နေပြီမို့လား။ ဒီလိုလာလို့…. ဦးဗိုလ်ကြီး သမီး ပိုးပိုးတို့ရန်ကုန်လိပ်စာကို သိနေတာပဲ နောက်ကျ လာလည်မှာပေါ့နော်။ သမီးလည်း စာတွေအများကြီး သင်ရ ဦးမယ်လေနော်။ စစ်သားတွေ စစ်သားအလုပ် လုပ်နေကြတာ။ သမီးကျောင်းသားက ကျောင်းသားအလုပ် လုပ်ရမယ်လေ ။ ဦးဗိုလ်ကြီး ရိပ်သာမှာ အမြဲပြောခဲ့တာ မေ့သွားပြီ လား …. ဆိုတော့ အဲဒါတော့ အဲဒါပေါ့ အဟီးဟီး… ဆိုပြီး မျက်ရည် က မတိတ်တော့ပါဘူး။ ကဲပါ မငိုနဲ့တော့နော်။ သမီးက လိမ္မာတယ်။ တိတ်တိတ်..ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရည်ကို သုတ်ပြီး ကလေးကိုပါ ဖွဖွလေး ဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သက်ပြင်း တစ်ချက်ချလိုက်မိ ပါတယ်။ သံယောဇဉ် အမျှင်တွယ်မိရင်ဖြင့် ဆိုတဲ့ ဓမ္မကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ကိုလည်းချက်ချင်း ပြန်သတိရမိလိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်က ခိုင်မာမြဲမြံစွာသံယောဇဉ် တွယ်ငြိပြီး ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်တပ်၊အရပ်ဒေသ၊မိမိနဲ့အတူကောင်းတူဆိုးဖက် နောက်တန်းလည်းနောက်တန်းမို့ ရှေ့တန်းလည်းရှေ့တန်းအလျောက် လက်တွဲခဲ့တဲ့ အရာရှိ/စစ်သည်တွေ၊ မိမိတို့ အရာရှိငယ်တွေကို ရပ်ဆွေရပ် မျိုးလို စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြ၊ တတ်အားသရွေ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကို ကျောခိုင်းပြီးနောက်တပ် အသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ရတော့မှာဖြစ်လို့ ဆို့နင့်စွာခံစားနေရတဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေအားလုံးကနေ မျက်ရည်အဖြစ် အသွင် မပြောင်းအောင် အထိန်းခက်ခက် ထိန်းနေလျက်က ဒီကလေးလေးကို ရုတ်တရတ်ပြန်မြင် လိုက်ရပြီး သူ့ ဦးဗိုလ်ကြီး ဆိုတဲ့သူကို လာနှုတ်ဆက်ရှာတဲ့ အရွယ်နဲ့မမျှ အောင်စကားတတ် ရှာတဲ့ ပိုးပိုးလေးရဲ့စကားသံတွေနဲ့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုလာတော့ ထိန်းမရတဲ့ ဝမ်းနည်းမှုက (ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့) မျက်ရည်ကျလာစေခဲ့တယ်။
ပိုးပိုးလေး ဆိုတာက သူ့ကိုမွေးပြီးတာနဲ့ သူ့အမေကဆုံးပါသွားခဲ့တာပါ။ မီးတွင်းထဲမှာ မိခင်ဆုံးပါးသွားရှာတဲ့ ပိုးပိုးလေးကို တပ်တစ်တပ်လုံးက ဂရုဏာစိတ် ယိုဖိတ်စွာနဲ့ လူတိုင်းက ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေး စကားမပြောတတ်ပြောတတ် အရွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရိပ်သာကို အမြဲလိုလိုသူ့အဖေ တပ်ကြပ်ကြီး မြင့်အောင်နဲ့ ပါပါလာတတ်ရာကနေ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရသလို အဲဒီအထဲမှာမှ ကလေး ချစ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုသီဟအောင်က လိုလေသေးမရှိ လုပ်ပေးသလို တပ်ထဲသွားလေရာ ခေါ်သွားတတ်လေ တော့ ပိုပြီးသံယောဇဉ်တွယ်ရှာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးရှေ့တန်းမြေမှာ ကံကြမ္မာမုဆိုးရဲ့ ထပ်မံနှိပ်စက်မှု လေလား အတိတ်ကဝဋ်ကြွေးကြောင့်ပေးလား မသိ။ ပိုးပိုးလေးရဲ့ ဖခင် ဆရာကြီးမြင့်အောင် တစ်ယောက် ရန်သူ့ မိုင်းနင်းမိပြီး ဘယ်ခြေတစ်ဖက် စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့အမေဆုံးသွားတာနဲ့ နောက်တစ်နေ့ တပ်ရင်းက မိသားစုတော်တော်များများအပါအဝင် တပ်ရင်းမှူး၊ဒုတပ်ရင်းမှူးနဲ့ မန္တလေးမြို့ထဲက အသိတွေက အစ မွေးစား ဖို့ ဆိုပြီး သူ့အဖေ ဆီကနေ ပိုးပိုးလေးကို တောင်းခဲ့တာကို မပေးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး မြင့်အောင်တစ်ယောက်က နောက်ဆုံးရန်ကုန်ပြောင်းပြီး အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေ အနားယူလိုက်တဲ့ သူရဲဘော်ဘဝက အတူတူ နေခဲ့တဲ့ သူ့ဆရာ တပ်ရင်းမှူး(အငြိမ်းစား) လင်မယားကို အမွေစားအမွေခံအဖြစ် ပိုးပိုးလေးကိုပေးလိုက်ခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်က အရက်ကိုနေ့ရောညပါ သမီးစိတ်၊ဝေဒနာစိတ် တွေနဲ့ ဖိသောက်ရင်း အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်ကာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကတည်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီလေ။
အဘ(ရင်းမှူးအငြိမ်းစား) လင်မယားက ကလေး အဖေနဲ့အမေအတွက် နှစ်လည်ကုသိုလ်ကို ကျောင်းခွင့်ရက် ယူပြီး ဒီတပ်မှာပဲ ပြန်လာလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ပိုးပိုးလေး တပ်ကိုခဏပြန်လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့လိုင်းခန်း ထဲမှာ ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ရတော့မယ်ဆိုတာ ပြောသံကြားလို့ လာနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန် တပ်ရင်းရုံးက ကိစ္စတွေအပြီး ကားပေါ် ပစ္စည်းတွေ တင်အပြီး ထွက်တော့မယ်ပြင်နေတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကံကောင်း ထောက်မစွာသွားတိုး ပါတော့တယ်။ တပ်ရင်းမှာသံယောဇဉ်အဖြစ်ဆုံး၊ ဂရုဏာအသက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ အသည်းစွဲ ပိုးပိုးလေး အခုတော့ ခြေထောက်လေးမှာ ဖုချိန်းသေးသေးလေးဆွဲထားလို့ မြို့မှာ ခေတ်နဲ့အညီ ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုအိမ်ယာမှာ နေရပြီဆိုတော့လည်း ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကအစ အရင်က ကျွန်တော်တို့တွေ ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ကျီအညံ့စားတွေနေရာမှာ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီး ရနံ့လေးတွေသင်းပျံ့နေတဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေ လက်ပတ်နာရီသေးသေးလှလှလေးပတ်ထားလျှက်နဲ့ တကယ့်ကို သူဌေးမိသားစုရဲ့ ကလေးလေးပုံစံပေါက်သွားတော့ သူ့အဖေ ဆရာကြီးမြင့်အောင်ကိုပါ ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ဖျက်ကနဲ သတိ ရလိုက်မိသလို ရင်ထဲမှာ ကလေးအတွက်လည်း ကျေနပ်ဝမ်းသာမှု မိမိကိုယ်တိုင် ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှု စိတ်မကောင်းမှုတို့ တစ်ပြိုင်ထဲ ရင်ထဲမှာခံစား လိုက်ရပါတယ်။ ပိုးပိုးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကို နောက်ဆုံး တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ဖောင်းကစ်ကစ်ပါးအစုံလေးကို တစ်ချက် မွှေးလိုက်ပြီး ဦးဗိုလ်ကြီးက ဟိုးအဝေးကြီးထိ သွားရဦးမှာ နောက်ကျနေမှာစိုးလို့ သွားတော့မယ်နော်။ သမီးက လိမ္မာပါတယ်။ စာတွေ ကြိုးစားနော်။ ဦးဗိုလ်ကြီးသင်ပေးခဲ့တာတွေလည်း မမေ့နဲ့ (သြကာသနဲ့ တစ်ချို့ ကဗျာလေးတွေပါ)ဒေါက်တာမကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ရိပ်သာမှာ ဦးဗိုလ်ကြီးတို့ကို ပိုးပိုးလေး ပြောခဲ့တာ မေ့သွားပြီလား။ ဆိုလိုက်တော့ ခေါင်းလေးရမ်းပြီးပြန်ဖြေရှာတယ်။အဲဒါဆို ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာ နဲ့ ကျောင်းစာတွေကို ကြိုးစားနော်။ ဦးဗိုလ်ကြီး အားတဲ့တစ်နေ့ ရန်ကုန်မှာ သမီး ပိုးပိုးလေးကို လာတွေ့ မယ်။ ဟုတ်ပြီလား။ မငိုနဲ့တော့နော် သမီးကလိမ္မာတယ်။ …ဆိုတော့ ဟင့် ကနဲ့ တစ်ချက်ရှိုက်လို့ အငို မျက်နှာလေး တစ်ခဏချင်းတည်သွားပါတော့တယ်။ လစာကြပ်တစ်ယောက် ရိပ်သာဘက်ကိုလာနေတာနဲ့ ဆရာမောင်မျိုး လာဗျာ ပိုးပိုးလေးကို ခေါ်သွားပေးပြီး အဘတို့ဆီ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါ လို့ဆိုလိုက် ချိန်မှာပဲ။ ဦးဗိုလ်ကြီး..ဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ဖက်တွယ်ပြီး မျက်ရည်တွေ ကောင်းကောင်းမခြောက်သေးတဲ့ သူပါးလေးနဲ့လာကပ်လို့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကို လာမွှေးရှာပါတယ်။ ကျလာဦးမယ့် မျက်ရည်ကိုပြန်ထိန်းရင်း ဆရာမောင်မျိုးဆီကို ပွေ့ချီလျက်နဲ့လှမ်းပေးလိုက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နောက်ကိုလှည့်မကြည့်မိအောင် ကြိုးစားပြီး ကားပေါ်ဝင်ထိုက်လိုက်တယ်။ ကဲ မောင်းတော့ ဆရာတင်ငွေရေ လို့ကားဆရာကို ပြောလိုက်ရင်း မိမိပြောင်းရွှေ့ရတဲ့တပ်တည်ရှိရာ ဒေသအသစ်ဆီ ရထားတစ်တန်ကားတတန်နဲ့ ထပ်မံ ခရီးချီဆက်ဖို့…………
shared by နေလွမ်းသူ at 12:53 PM